IFTIINKACUSUB.COM: Mataqanaa cabirka Albaabka Janadu inta uu leeg yahay ?
Mataqanaa cabirka Albaabka Janadu inta uu leeg yahay ?
Naf kastaahi maalinta shiddada marka ay dhahaysa "nafsii nafsii", isaga waa shaqsiga keliye ee aanan sidaasi oran doonin. Wuxuu dhihi doonaa "Yaa Rabbi ummatii, ummatii!!".
Nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم) waxaa lasiiyey mucjisooyin fara badan marka laga reebo Quraanka kariimka. Mucjisada Quraankuna waa midda ugu weyn ee lasiiyey siduuba Ilaahay sheegey. Taasoo xaqnimadiisa maanta la arko. Mucjisooyinka kalee nebigeenna suubban (صل الله عليه وسلم) lasiiyey waxaa kamid ah mucjisooyin ficilleed, sida ceel biyo eber ah oo inta uu ku tufay biyo yeeshay. Geed meel taagan oo uu u yeeray oo u yimid, dabeetana geedkii uu weydiiyey cidduu yahay, saa isagana uu yiri "Waxaad tahay rasuulkii Ilaahay". Waxaa kamid mucjisooyinka noocaas ahi, barakaynta cunto yar oo ay cuneen in ka badan 1400 nin, caano galaas yar ku jira oo ay cabbeen Abuu Hureerah iyo asxaabu sufah oo ka badneyd siddeetan nin. Il uu leeb uga dhacay oo kasoo dhacday mid kamida asxaabtiisii (Abuu Qataadah) oo uu dib ugu celiyey halkeedii, dabeetana u noqotay il ka aragti fiican tii hore iwm.
" والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى "
"Kan (Allaha) ay nafta Muxammad (صل الله عليه وسلم), gacantiisa (awooddiisa) ku jirtaan ku dhaartaye labada cidhif ee albaabka Jannada, waxay isu jiraan inta ay isu jiraan Makkah iyo Hajar (Baxreen), ama Makkah iyo Busraa".
Intaas kumuu ekaanine nebigu (صل الله عليه وسلم) wuxuu yiri "Ama Makkah iyo Busra. Subxanallaaah!!, waxaa cajiib ah oo isweydiin mudan nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم) ma wuxuu haystay miqyaas ama qalab cajiib ah oo dhulalkaasi uu ku cabbiray? Weliba waxaa cajiib ah oraahdaasi markuu nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم) oranayay wuu dhaartay, asagoo ku dhaaranaya Allaha ay naftiisa gacantiisa ku jirta, taasoo caddeyneysa sugnaanta hadalkiisa.